विश्वकप लिग २ : ओमानलाई नेपालको मध्यम लक्ष्य- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
'पुरानो घर'को नयाँ नाटक 'म'
२ पटक भत्किँदै बनेको नाटकघरको कथा
भाद्र २९, २०७८ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल छेउमा नयाँ नाटकघर ठडिएपछि रंगकर्मी सुलक्षण भारतीलाई लागेको थियो, 'साँवा तिर्न नसके पनि ब्याज तिर्न सकिएला ।' नयाँ नाटकघर निर्माणमा झन्डै ३५ लाख खर्च भयो । खर्च नाटकबाटै उठाउने सोचे ।
नयाँ नाटकघरको मञ्चबाट पहिलो नाटक 'रोटेपिङ' गर्ने तयारी सुरु भयो । कलाकारको समूह ठूलै थियो । वैशाख १ बाट नाटक मञ्चन गर्ने तयारी धमाधम अघि बढ्दै गर्दा चैतमा कोरोना महामारीले देश लकडाउनमा गयो । नाटक स्थगन गर्नुको विकल्प थिएन । त्यहीमाथि नाटकघरको संरचनामै समस्या देखियो । नाटकघर हल्लिन थाल्यो । पुरानो संरचना पूरै भत्काएर नाटक घरलाई नयाँ आकार दिए । त्यसपछि दोस्रो नाटकको रिहल्सल थाले । फेरि दोस्रो पटक देशमा लकडाउन घोषणा भयो ।
सरकारले निषेधाज्ञा हटाएसँगै सुलक्षणको टिम फेरि नयाँ नाटकको तयारीमा जुटेका छन् । 'पुरानो घर'को पहिलो नाटक -'म' । टिमको संकल्प छ, 'अब जति दिन हुन्छ नाटक त गर्ने नै ।' असोज १ बाट यो नाटक मञ्चन हुँदैछ । सय दर्शक क्षमता भएको नाटकघर ४० दर्शक राखेर संचालनमा आउँदैछ । लेखक एवं निर्देशक सुलक्षणले महामारीको समयमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन सोलो 'एक्ट' रोजेका छन् । नाटकमा सुलक्षणकै सोलो प्रस्तुति रहनेछ । भत्किने भत्काउने गर्दै नयाँ स्वरुप पाएको 'पुरानो घर'ले पहिलो नाटक गरिरहँदा लामो समयदेखि यही दिनको पर्खाइमा रहेका सुलक्षणका टिम उत्साहित देखिन्छन् ।
'काम अड्किरहेको थियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त नाटक गर्न पाइयो । थिएटर पनि धेरै अगाडिदेखि खोल्ने भनेको सकिरहेको थिएन । पहिलो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नाटक घर पूरा भइसकेको थियो । गर्ने भनिएको नाटक स्थगन गर्नुपर्‍यो । महामारीले संसार नै रोकियो २ वर्ष, 'सुलक्षण सुनाउँछन्, 'हामी मात्र होइन अरु पनि रोकिए । त्यो हिसाबले अहिले सोलो नाटक गर्दैछौं । उत्साहित छौं । अरु नाटक गर्थ्यौं होला । तर कोरोनाको सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन यो नाटक छनोट गर्‍यौं ।'
नाटकघर बन्न २ वर्ष लाग्यो । महामारीले २ वर्ष थपियो । निजी लगानीमै नाटकघर बनाएको बताउँछन् सुलक्षण । पत्नी सिर्जना अधिकारी, कलाकार केनिपा सिंह, कुन्दन थारुसँग मिलेर 'पूरानो घर' बनाए उनले । तर खर्च उठाउनुपर्ने बेलामै कोरोनाकै कारण आम्दानीको स्रोत सुक्यो । त्यहीमाथि नाटकघरको संरचना बिग्रिएर खर्च दोब्बर भयो । नाटकघर बनाउँदाको ऋण बोकेर मञ्चमा फर्कँदैछन् सुलक्षण । नाटक मञ्चन हुन थालेसँगै ऋणको भार कम हुनेमा आशावादी छन् । '७०/८० लाख खर्च भयो । ऋण धेरै छ । नाटक चल्यो भने सबै ठीक हुन्छ होला । चल्यो भने त ठीक भइहाल्छ नि !,' उनी आशावादी सुनिए ।
नाट्य क्षेत्र व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । नाटकघर बनाउँदाको ऋणले बारम्बार नम्बर परिवर्तन गराउन बाध्य छन् उनी । 'मेरो नम्बर परिवर्तन भइरहन्छ,' पीडा मिसिएको स्वरमा मन्द मुस्काउँदै भने, 'हामी ४ जना मात्र छौं टिममा । हामीले पैसा भएर यो नाटकघर खोलेका होइनौं । हामीहरु खासै कमाउँदैनौं पनि । त्यसैले गाह्रै भयो ।'
नाटकघरको प्रवेशद्वार नजिकैको संरचना अझै बनिसकेको छैन । भित्रको मञ्च भने तयार भइसक्यो । दर्शकदीर्घाका कुर्सी दर्शक कुर्दै गरेको भान हन्छ । आर्थिक अभावकै कारण नाटकघर पूर्ण निर्माण असम्भव बन्यो । 'म'को आम्दानीले बाँकी काम पूरा गर्दै जाने उनीहरुको तयारी रहेछ । 'अझ पनि कति काम पूरा हुनै बाँकी छ । सबै पूरा हुन त समय लाग्छ । पैसा पनि त हुनुपर्‍यो नि त । अलिअलि पैसा यो नाटकबाट आयो भने थिएटरको काम पूरा गर्छौं । जे होस मञ्च पाइयो । त्यो भन्दा ठूलो कुरा त के होला र हाम्रो लागि,' उनले सुनाए ।
खासमा भाडामा दिँदै आएको आफ्नै घरमा सुलक्षणले नाटक घरको 'ब्ल्याक बक्स' निर्माण गरेका हुन् । चार वर्षदेखि उक्त ठाउँ त्यतिकै ओगटेको देख्दा बुवा आमा सुलक्षणलाई गाली पनि गर्छन् । '४ वर्ष भाडामा दिएको भए कत्ति हुन्थ्यो पैसा ? मोबाइल अफ गरेर राख्छस् !'
अहिले जहाँ नाटकघर खडा छ, त्यहीँ सुलक्षणको पूरानो घर थियो । जुन भुइँचालोले भत्कियो । बुवा आमा त्यो उक्त घरलाई मर्मत सम्भार गरेर भाडामै दिन चाहन्थे । तर उनले त्यहीँ नाटकघर निर्माण गरे । नाटकघरको नाम 'पुरानो घर' राखेका छन् । यो नाम राख्नुको पछाडि बिम्व छ । पुरानो घरमै नाटकघर निर्माण भएकाले उक्त नाम राखिएको हो । रंगकर्मी साथिहरुसँग मिलेर मण्डला नाटकघरको सुरुवात गरेका सुलक्षण मण्डलालाई पुरानो घर मान्छन् । मण्डलासँग छुट्टिएर नयाँ नाटकघर बनाउँदै गरेका उनलाई 'पुरानो घर' निर्माण गरेझैं लागेको छ । त्यसैको बिम्वात्मक नाम हो, 'पुरानो घर' । पुरानो घरभित्रको संरचना मण्डलासँग मिल्दो देखिन्छ । पुरानो घर प्रवेश गर्ने बित्तिकै सुलक्षण आफैंले हामीलाई भनेका थिए,'यस्सो हेर्दा मण्डला छिरेजस्तो लाग्दैन ?'
सुलक्षणलाई 'पुरानो घर'सम्म उनकै विचारले डोर्‍याएको हो । उनी थप्छन्, 'आफैंले एउटा सपना देखेर थिएटर समूहसँग मिलेर काम गर्दै आइरहेको थिएँ । त्यो छोडेर आएँ । एउटा पुरानो घर मैले छोडेर आएँ, यहाँ त्यही बनाएको हो जस्तो अनुभव गरें । त्यसैले पुरानो घर नाम राखें ।'
'पुरानो घर'को निर्माण अगाडि बढाउँदा 'मण्डला फुट्यो' भन्ने हल्ला नचलेको होइन । तर उनी विचार नमिलेपछि छुट्टिएको स्वीकार्छन् । 'सबै कुरा राम्रै छ । विचार भन्ने कुरा फरक हुन्छ । विचारले मानिसलाई डोर्‍याउनुपर्छ । सायद आफ्नै गर्नुपर्छ कि भन्ने विचारले नै यहाँ डोर्‍यायो,'सुलक्षण सुनाउँछन्, 'छोडेर हिँडेपछि छुटेकै हो । तर आत्मियता सबैसँग कायम छ । सबैसँग सहज वातावरण नै छ । व्यावसायिक इगो हुनु त मानवीय स्वभाव नै हो । त्यो सबैमा भइहाल्छ । परिआएको बेला भविष्यमा सँगै काम पनि गरिन्छ ।'
महामारीअघि नाटकघरको संख्या थपिँदै थियो । रंगमञ्चको संख्या थपिँदै जाँदा एउटा प्रश्न पनि उठेको थियो । 'व्यक्तिपिच्छे रंगमञ्च किन चाहियो । सबै मिलेर एउटै रंगमञ्च चलाउन सकिन्न ?
यो प्रश्नको जवाफ छ सुलक्षणसँग । उनी भन्छन्, 'सिनामंगलमा एउटा मोमो पसल छ अर्को किन खोल्ने भनेर सोध्नु त मज्जा आएन नि ! अर्को मोमो पसल खोल्नेबित्तिकै अर्को स्वाद आउँछ । त्यसमा अचारको स्वाद फरक हुन्छ । रंगमञ्च थोरै भन्दा धेरै राम्रो । जति धेरै भए, कलात्मक वैचारिक बहस हुने ठाउँ हामीले पाउँछौं ।'
रंगमञ्च प्रश्न गर्ने ठाउँ त हो । प्रश्न गर्ने ठाउँ बढ्दा त्यसमा कुनै बेफाइदा देख्दैन् उनी । नाटकघरको संख्या थपिनु नयाँ पुस्ताका लागि राम्रो पक्ष ठान्छन् । 'नाटकघर थोरै हुँदा एउटा नाटक गर्न पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ । म आफैले एउटा नाटक गर्न २ वर्ष पर्खेको छु । गुरुकुल थियो, त्यहाँ गएर नाटक गर्ने अवस्था थिएन । बल्लतल्ल मण्डला खुल्यो । रंगमञ्च धेरै खुल्दा नयाँ पुस्ताले नाटक गर्न सिक्न धेरै पर्खनु पर्दैन ।'
फरक शैलीको स्वादका लागि पनि रंगमञ्चहरु चाहिने उनको तर्क छ । 'शैली भनेको त फरक विचार हुन् । त्यस कारणले पनि नाटकघरहरु खुल्नुपर्छ । कि त ब्रोडवेमा झैं सबै नाटकघर एउटै ठाउँमा हुनुपर्छ । राज्यले एउटा जग्गा दिएर 'थिएटर हब' नै बनाउन सक्थ्यो । नाटकघरको छुट्टै सौन्दर्य थपिन्थ्यो,' उनले भने ।
नवनिर्मित 'पुरानो घर'ले राम्रा नाटकहरु दर्शकमा पस्कने र बहसको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । त्यसैको प्रतिफल हो, 'म' । यो नाटकको नाम पहिला 'एक्वा' थियो । सुलक्षणले नाम परिवर्तन गरेर 'म' बनाए । एकजना कलाकारले १५/१६ वर्ष काम गर्दा उसले गरेको अनुभवलाई समेटिएको छ 'म'मा । १ घण्टा १५ मिनेट लामो यो नाटक २० दिनमै तयार पारिएको हो । 'यो नाटक एउटा कलाकारले पत्ता लगाएको 'म' हो । हामी कलाकारले अभिनयमा एउटा यात्रा गर्छौं । त्यो यात्रामा मैले भेटेको एउटा संवाद हो 'म',' नाटकको विषयवस्तुबारे उनी सनाउँछन्, 'सम्पूर्ण मानिसलाई एक पटक लाग्ने कुरा हो यो । 'म' भन्ने बित्तिकै म भइहाल्यो । 'म'ले अस्तित्वसम्बन्धी कुरा गरेको हो कि जस्तो लाग्छ । तर ठ्याक्कै त्यो हो भनेर म भन्दिनँ ।'
यसअघि उनले निर्देशक, लेखक भएर 'बिलगेट्स पण्डित', 'बोक्सीको घर', 'मिल्क टी', 'लाटीको छोरो', 'तीनकुने, 'सलेदो' लेखे । तर यो नाटक नितान्त कलाकार भएर लेखेका हुन् । 'म भनेको हरेक व्यक्ति हो । यहाँ नाटक हेर्न आउने ४० जनाभित्र 'म' छ । त्यो 'म'को कथा हो,' उनले थपे । सुलक्षण एउटै विषयमा अड्किएर काम गर्न रुचाउँदैनन् । काममा फरकपन ल्याउन खोज्छन् । नाटकले पार्ने प्रभाव र बहसमा रमाउँछन् ।
'नाटकले हाम्रा जति पनि दर्शक छन्, उनीहरुलाई कस्तो असर पार्छ त्यसले उत्साह दिन्छ होला । नाटकघर खुल्नु र नाटक गर्नु गौण कुरा हुन्। अब पुरानो घरको प्रस्तुतिले दर्शकमा कस्तो असर गर्छ म त्यसको लागि उत्साहित छु,' पुरानो घरको नयाँ मञ्चमा बसेर गफिएका सुलक्षणले भने ।
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ १९:४४